एउटा फोन कलले जुराएको संगीत : अनि जन्मियो- 'को होला त्यो…'
काठमाडौं- तनहुँका लोकपप गायक सुनिल गिरी काठमाडौंमा आएपछि शिलु अधिकारीले सञ्चालन गर्ने रेडियो कार्यक्रम 'म पनि गाउन सक्छु' मा फोन गरे, लाग्यो । उक्त कार्यक्रममा उनले नविन के भट्टराईको 'तिमीलाई …' भन्ने गीत गाए ।
उनले कार्यक्रम अन्तिमसम्म सुने । गिरी सुनाउँछन्, 'आजको कार्यक्रमको विजेता हुनुहुन्छ- सुनिल गिरी भन्नुभयो । ओहो के चाहियो र मलाई । प्राइज पनि तीन महिना संगीत सिक्ने । ढुंगा खोज्दा देउता भने जस्तो भयो ।'
त्यसो त गिरीले सानैदेखि ठूलो गायक बन्ने सपना देखेका थिए । गायक बन्न उनले पोखराको विन्ध्यवासिनी संगीत विद्यालयमा ३ महिना अध्ययन पनि गरे ।
उनमा संगीतको हुटहुटी जागेपनि परिवारका सदस्यहरूले खासै चाख दिएका थिएनन् रे । शुरूआती दिनबारे उनी खुल्छन्, 'बुबा इन्डियन आर्मी भएका कारण छोरा आर्मी भएको हेर्न चाहने कि त गाउँमा शिक्षकहरूको अलि सम्मान हुने भएकाले छोरो टिचर बन्दिएहुन्थ्यो भन्ने थियो ।'
बुबाआमाको चाहना भनेको पढेर राम्रो काम गर्ने भन्ने थियो रे । गाउँमा शिक्षकको सम्मान हुने भएकाले छोरो त्यतातिर लागेको हेर्न चाहेको गिरी बताउँछन् ।
संगीत कहाँ सिक्ने के गर्ने भन्दै गल्ली चहार्ने बेलामा उनलाई त्यो फोन कलले गज्जबको काम गरेको थियो । त्यसपछि उनले सारेगम कला केन्द्रमा अशोक पौडेलसँग ३ वर्ष संगीत सिके । उनलाई अझै संगीत सिक्नु थियो । त्यसपछि उनी गान्धर्व संगीत विद्यालय पुगे जहाँ चन्दन श्रेष्ठ गुरु थिए । सांगीतिक सिकाइका दिन उनी यसरी सम्झन्छन्, 'गान्धर्व संगीत विद्यालयमा चन्दन श्रेष्ठसँग फेरि पहिलो वर्षबाट संगीत सिकेँ । त्यहाँ मैले ६ वर्षसम्म शास्त्रीय संगीत सिकेँ ।'
लगभग ७ वर्षको सिकाइपछि गिरीले सांगीतिक ज्ञान हासिल गरेका थिए । उनले विभिन्न राग, सुर र लय छामिसकेका थिए ।
यसैबीच जन्मियो- को होला त्यो …
बानेश्वरस्थित एक कफी शपमा लोकान्तरसँग गफिएका लोकपप गायक गिरीले आफूले सानैदेखि गीत लेख्ने गरेको सुनाए ।
एक दिन उनी घुम्न स्वयम्भूमाथि ह्वाइटगुम्बा पुगे । र त्यहाँ देखे- ममीसँगै हिँडिरहेकी एक सुन्दरी ।
भन्छन्, 'मम्मीसँग आएकी एकजना युवतीले मलाई हेरेको हेर्‍यै गरिन् । कतै देखे जस्तो । त्यहाँ आँखा पनि जुध्यो । कहीँ न कहीँ देखेको हुनुपर्छ ।'
त्यसपछि उनलाई लाग्यो- को होला मलाई यसरी हेर्ने ती युवती ?
अनि गीतको पहिलो र भाव बोकेको लाइन फुर्‍यो 'को होला त्यो …'
भन्छन्, 'त्यहाँ परिस्थिति बन्यो । अनि अरू चाहिँ मैले घरमा आएर लेखेँ ।'
त्यसपछि उनले आफ्नो पहिलो गीत रेकर्ड गराए ।
गीत रेकर्ड गराउँदा पनि एउटा गज्जबको संयोग परेको रहेछ । उनी राम्रो एरेन्जर खोज्दै जाँदा गोपाल रसाइलीसँग भेट भएछ । गीत सुनाए । उनले राम्रो छ भने । उनलाई लाग्यो- राम्रो त जसले पनि भन्छन् नि । वास्तवमै राम्रो हो कि होइन थाहा पाइनँ ।
गीत बज्दै जाँदा सतिश श्रेष्ठ भन्ने दाई आएर भनेछन्, 'आहा ! कति राम्रो गीत ।'
भिडियो निर्देशनमा कहलिएका श्रेष्ठले सुनिललाई भनेछन्, 'भिडियोको प्लान के छ ? बनाउने हो ? '
उनले 'हुन्छ' भने ।
गिरीले सतिशलाई पत्याए किनकी हालसालै उनको 'मैले माया गर्न जानिनँ होला …' गीतको भिडियो मन पराइएको थियो ।
उनी भन्छन्, 'संजोगले सतिश दाइसँग भेट भयो । उहाँको क्यामेराम्यान उमंग शाही थिए । पल शाह नजिकका साथी रहेछन् ।'
उनले सतिशलाई भाग्यवश भेटाएको बताए । मोडल प्रकृति श्रेष्ठलाई भने मोबाइलमा फोटो देखाएपछि आफूले ओके भनेको उनले बताए ।
'को होला त्यो' सुनिल गिरीको पहिलो गीत थियो भने पल शाहको पनि पहिलो म्युजिक भिडियो थियो । गीत र मोडल दुवै सुपरहिट भए ।
पहिलो गीत हिट भएपछि आफूमा झन् चुनौती थपिएको उनले महसूस गरे । त्यसपछि गिरीले अझ राम्रा गीत दिनुपर्छ भन्ने सोचे ।
पहिलो गीत नै हिट हुन्छ जस्तो लागेको थियो त ?
उनले उत्तर फर्काए, 'कहाँ लाग्नु नि । एउटा सामान्य गाउँबाट आएको मान्छेको कति थिए सपना । पछि सपनाले मूर्त रूप लिँदै गर्दा खुशी लाग्यो ।'
गफैगफमा उनले एउटा रमाइलो घटना सुनाए । एकजना भाइले भनेछन्- को होला त्यो गीत त पल शाहले गाएको होइन र ?
तपाईंका गीत हिट तर गायक किन गुमनाम ?
कारण खुलाउँदै भने, 'देउराली भञ्ज्याङ, को होला त्योमा पल शाहले मोडलिङ गर्नुभयो । मान्छेले उहाँले गीत गाएको भ्रम पाले । गायकको लिपसिङ्क एकैछिन थोरै समयका लागि हुन्छ । गाउनेभन्दा मोडल हाबी भएर हो यस्तो भएको ।'
उनले गाउनेलाई खोजीनीति गर्ने मान्छे निकै कम हुने भएकाले गायक गुमनाम भएको बताए ।
गुमनामीबारे उनको धारणा अर्कै छ । आफ्नै गीतमार्फत राम्रा कलाकार जन्मिएको र गीत सुनेर पछि मानिसहरूले चिन्दा 'ए यो गीत यसले गाएको हो…' भन्दा आफू झन् खुशी हुने उनी बताउँछन् ।
मानिसहरूले पल र प्रकृतिको जोडीको 'हनी बनी' पहिलो म्युजिक भिडियो भन्ने लागेपनि 'को होला त्यो' नै पहिलो भएको गिरीको भनाइ छ ।
लोकपप गायकका रूपमा चिनिन्छन् सुनिल गिरी । उनका प्राय: गीत लोकपपमै आधारित छन् । 'को होला त्यो', 'देउराली भञ्ज्याङ', 'लेकाली माया', 'टोलाउँदै होला' लोकपप गीत हुन् ।
के हो त लोकपप भन्या ? गिरीको जवाफ छ , 'लोक गीतलाई अलिकति फ्यूजन गरेर परिवेशका कुराहरू उठाउने, डाँडापाखा, मादल, बाँसुरीहरूलाई जोडेर बनाइने गीत लोकपप हुन् ।'
तपाईंका प्राय: गीतहरू एकै शैलीका छन् नि ? यसको उत्तर उनले कूटनीतिक ढंगले दिए । 'मेरो बारीको माटो आलु खेतीका लागि योग्य छ भने म फापर किन छरौं ? कोदो किन छरौं ? म आलुनै रोप्छु नि !'
संख्यामा भन्दा पनि गुणस्तरमा ध्यान दिएर गीत निकाल्ने सुनिलले बताए । भन्छन्, ' मलाई गीतको संख्या बढाउनु छैन । आफ्नै गीत गाउँछु । बरू थोरै गाउँछु ।'
अरूको गीत नगाउने त ? उनले जवाफ दिए, 'आफ्नै सानो दोकान छ, त्यसमै कत्र्याककत्र्याक चलिराछु भनौं न । होलसेल नगरौं भनेर हो ।
गिरी अब लोकदोहोरीतर्फ पनि ढल्कँदैछन् । उनी अहिले कौडा गीतको तयारीमा छन् । दशैंपछि आफू र प्रिया भण्डारीको स्वरमा उक्त गीत आउन लागेको गिरीले बताए ।